34 Mockup ho an'ny famolavolana boaty, kitapo ary fonosana XNUMX maimaim-poana. Famoronana an-tserasera
Ianao tadiavina fanesoana boaty, kitapo na fonosana hafa? Avy amin'ireto andalana ireto dia mazàna isika mitondra ny loharanom-pahalalana isan-karazany avy amin'ny logo na endri-tsoratra, ka hatramin'ny inona ireo fampianarana hianarana teknika rehetra izay misy ifandraisany amin'ireo programa famolavolana manan-danja indrindra toa ny Illustrator na Photoshop.
Amin'ity indray mitoraka ity dia handeha ho any amin'ny Mockups amin'ny PSD izahay noho izay mety ho izy fonosana karazana vokatra rehetra. Ireo fanesoana 20 ireo dia mihazakazaka amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany fanesoana boaty na fanesoana kitapo, amin'izay ianao mety hahita ilay tianao hatolotra fanomezana manokana na mety ho iray ho an'ny asa manokana. Avy amin'ny fanesoana boaty kiraro, marika ho an'ny tavoahangy misy divay na maromaro ho an'ny kitapo isan-karazany, ny marina dia manana endrika mahomby sy manokana izy ireo.
Tsy maintsy tadidiko ireo loharanom-baovao misokatra ny mockups amin'izay ianao afaka mampiasa azy amin'ny antony rehetra nefa tsy manahy na inona na inona. Azonao atao ihany koa ny mamaky ity fidirana ity raha te hahalala ny fomba anaovany izany mamorona maneso anao manokana sa inona izany lisitra hafa amin'izy ireo fa bebe kokoa amin'ny dokam-barotra any ivelany. Ireo loharano azo ampiasaina mba hananana repertoire tsara hanehoana ny mpanjifa na hanolotra teti-bola amin'ny fomba matihanina kokoa nefa tsy mila mandany fotoana amin'ny zavatra rehetra.
1 Fanesoana kitapo volontsôkôlà
2 Fanesoana tavoahangy ceramic
3 Mockup amboara plastika
4 Fanesoana tavoahangy labiera
5 Fanesoana kitapo fiantsenana
6 Fanesoana firakotra firaketana Vinyl
7 Ho an'ny boky sarotra
8 Ho an'ny vokatra feno boaty
9 Fanesoana kitapo volontany ho an'ny mofo
10 Ho an'ny kahie mahazatra
11 Fanesoana ny marika akanjo na zavatra hafa
12 Mockup kitapo hafa
13 Fanesoana fonosana CD
14 Ho an'ny kitapo
15 Fanesoana fonosana varingarina
16 Ho an'ny harona plastika
17 Ho an'ny kitapo lamba
18 Fanesoana ny marika divay
19 Fanesoana boaty kiraro
20 Fanesoana boaty baoritra
21 Fametahana boaty kely
22 Fonosana plastika
23 Fonosana taratasy volontsôkôlà
24 Ho an'ny tavoahangy ranom-boankazo
26 Karatra ho an'ny boaty baoritra
27 Mpanome tavoahangy
28 Fonosana fantsom-bozaka
29 Tote kitapo
30 Fanesoana kitapo fiantsenana
32 Boky mirakotra
34 Sariitatra ho an'ny kahie
Fanesoana kitapo volontsôkôlà
Un Fanesoana tsotra sy kanto hahafahanao mamorona andiana harona taratasy misy fitandremana sy fanoloran-tena lehibe.
Fanesoana tavoahangy ceramic
Mila mitandrina ianao fa ny tavoahangy na fonosana manana loko maivana ka mifanaraka tsara amin'ny fanesoana amin'ny maizina sy volamena.
Mockup amboara plastika
Miaraka amina endritsoratra iray manokana, io dia manokana ho an'ireo kaopy plastika izay matetika an-tanantsika rehefa mandeha any amin'ny hotely fisakafoanana haingana izahay.
Fanesoana tavoahangy labiera
Azo ovaina tanteraka amin'ny marika azonao atao ampiasao amin'ny labiera fanaovana asa-tananao izay amidinao eo an-toerana.
Fanesoana kitapo fiantsenana
Famolavolana minimalista iray ary tena tsotra ka kitapo fiantsenana ho kanto tokoa.
Fanesoana firakotra firaketana Vinyl
Para mozika elektronika ity fanesoana firaketana vinyl ity mihoatra ny tonga lafatra ny mampifanaraka azy amin'ny feon'ny elektro an'ny mozikanao.
Ho an'ny boky sarotra
Mba hamoahana boky, a famolavolana typography izay mifanaraka amin'ny karazana mpitari-dalana rehetra Mianatra.
Ho an'ny vokatra feno boaty
Como raha hivarotra antivirus izahay na rafitra fiasa vaovao, ity mockup ity dia mety aminy.
Fanesoana kitapo volontany ho an'ny mofo
For a trano fisakafoanana sakafo haingana ity kitapo taratasy ity miaraka amin'ny anaran'ny fanorenanao.
Ho an'ny kahie mahazatra
Raha mila fanomezana kanto ho an'ny namana na mpianakavy ianao dia ity Ny mockup dia tonga lafatra kokoa miaraka amina lohahevitra iray am-boalohany sy azy manokana.
Fanesoana ny marika akanjo na zavatra hafa
Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no ilainay izany fanesoana izany asio marika ny akanjonay izay tiana amidy.
Mockup kitapo hafa
Fanesoana iray hafa ho an'ny kitapo taratasy volontany ary izany dia manolotra ny hasin'ny fahaizana manampy lahatsoratra isan-karazany.
Fanesoana fonosana CD
Na dia lany andro kely aza ny CD, ho fanomezana ho an'ny fety dia mety ho tonga mora raisina.
Ho an'ny kitapo
Kanto, tsotra ary minimalist, Inona no mbola tadiavinao?
Fanesoana fonosana varingarina
Tsy izy ireo ovy malaza, fa mety ho tena ilaina amin'ny vokatra sakafo mitovy amin'izany.
Ho an'ny harona plastika
Kitapo plastika hamidy ary koa mahazo vola ho an'ny fitsangatsanganana manaraka mazava ho azy.
Ho an'ny kitapo lamba
Mitovy amin'ny etsy ambony ihany, fa miaraka amin'ny fahatsapana ekolojika izay tsy azo adino.
Fanesoana ny marika divay
Si ianao no mamboatra divay ho anao, ity marika ity dia lavorary, na dia tsy be mpitia aza.
Fanesoana boaty kiraro
Con loko maro ity fanesoana ity izay manome fiainana be dia be amin'ny kiraro izay tsy maintsy hitafy lamina mitovy.
Fanesoana boaty baoritra
Tsy mety ho tsotra kokoa izany fonosana ity.
Fametahana boaty kely
Ho an'ny karazana asa rehetra a marika fitoeran-javatra kely, Olona misy menaka?
Como raha toa ka tokony hametraka napkin isika, ity fonosana ity dia manana sentona tena manokana.
Fonosana taratasy volontsôkôlà
Ny iray hafa miaraka amin'ny motif'ny baoritra misy a endri-tsoratra banga mahaliana.
Ho an'ny tavoahangy ranom-boankazo
Saika toy ny raha mba hanitra hanitra, fa bebe kokoa ho an'ny ranom-boankazo na isotonic.
Mitovy amin'ilay teo aloha, na dia misy a famolavolana minimalista betsaka kokoa.
Karatra ho an'ny boaty baoritra
Lohahevitra voninkazo miaraka amin'ny a marika banga tonga lafatra hamenoana lahatsoratra famaritana.
Perfecto ho an'ny savony na io menaka manokana io ho an'ny volombava rehefa tena lamaody izy ireo.
iray hafa fomba mahaliana amin'ny fahazoana fonosana ho an'ny dokam-barotra sy ny marketing.
Para mahazo vola tsara amin'ny fiafaran'ny dia mazava ho azy, ity fanesoana miaraka amina lahatsoratra mahatsikaiky ity dia afaka manome lakolosy.
Tsotra ary tsy mitady be bebe kokoa.
Volavola miolakolaka miaraka amina pastel sy mavokely ho an'ny a kitapo kanto miaraka amin'ny fikitika vehivavy.
Como raha niverina am-polony taona maro isika, mahaliana tsotra izao ity fanesoana ity.
Con loharano amin'ny tanana, fanesoana iray hafa ho an'ny kahie.
Sariitatra ho an'ny kahie
Raha izany no izy boky fampianarana teknika kokoa, tonga lafatra ho azy.
Manana ve ianao? fanesoana boaty tianao sy tianao zaraina aminay? Asehoy anay ny mockup kitaponao na karazana fonosana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Fanesoana boaty sy kitapo
Tiako izy ireo :)
Hey namana, tsy anao ireo fanesoana ireo